Mmekọrịta na-enye obi ụtọ na-enyere aka jikwaa nsogbu Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health nchegbu
Maka nyocha ngwa ngwa banyere nrụgide, lelee nke a video.
Nchegbu siri ike bụ mgbaàmà ịdọ aka ná ntị nke anụ ahụ na-enyere anyị aka ịzaghachi na egwu egwu mkpirikpi ma ọ bụ mgbanwe na gburugburu ebe obibi anyị. Ọ bụ usoro nlanarị isi. Dika nzaghachi nke ihe omumu, o na-achikota ike ayi n'olile anya ime ihe, di ka agha ma obu agha. Enwere ike ịkụda ya na nzaghachi anọ: egwu (agụụ), ụgbọ elu (zere ịhụ emerụ bụ mgbe kachasị mma ịlụ agha); agha (na-eche ihu na nsogbu) ma na-ehichapụ (na-egwu egwu ma na-atụ anya na onye iro / egwu na-aga n'ihu). Nkebi nke a nwere ike itinye kwa nsogbu kwa ụbọchị.
Mgbe anyị dị ike, anyị nwere ume iji merie okwu mkpirikpi ma ọ bụ nnukwu nchekasị, dịka ọmụmaatụ, na-agba ọsọ iji nweta bọs. Mkpụrụ obi anyị na-arị elu, ọbara shuga anyị na-agbanwe agbanwe, ọnyá anyị na-amụba ka ọ dị jụụ ahụ ka anyị na-agba ọsọ. Mmeghachi omume ndị a nile na-akpata site na hormones na-akpata nchekasị, adrenaline na cortisol. Mgbe mbụ a kpaliri anyị, kwuo, site n'ịhụ ụgbọ ala anyị tupu anyị abanye na nkwụsị ụgbọ, anyị na-emepụta adrenaline na noradrenaline (okwu American bụ epinephrine na norepinephrine) ruo minit ole na ole iji nyere anyị aka ịchọta anyị n'oge ahụ. Mgbe nchekasị ahụ gafere (lee! Anyị mere ya) ahụ anyị na-alaghachi ngwa ngwa, a na-eweghachite nkwụghachi.
Ọ bụrụ na nrụgide ahụ na-aga n'ihu, dịka ọmụmaatụ, anyị echefuola bọs ma nọrọ n'ihe ize ndụ nke ịnọ ọdụ maka nzukọ ma ọ bụ ụbọchị dị mkpa, mgbe ahụ, cortisol na-ahụ ọkụ na-ere ọkụ iji mee ka ike dị elu ruo ogologo oge iji merie nsogbu. Cortisol na-eme ka ikike dị iche iche dị n'ime imeju na uru iji nye anyị aka 'ịlụ ọgụ' ma ọ bụ 'gbapụ'. Nsogbu a bụ na ọ nwere ike ịnọgide na-agbanye n'ime usoro ahụ nke ọma mgbe onye nrụgide ahụ gafere.
Cortisol nọgidere na-eju usoro anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ nsogbu na-eweta ndụ anyị. Taa, ndị nrụgide na-enwe mmetụta uche, nchegbu banyere ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta ezinụlọ, ọganihu akụ na ụba ma ọ bụ owu ọmụma, kama ịdaba egwu dịka agha ndị agbụrụ ma ọ bụ ndị na-agbanye n'ọhịa. Ahụ anyị na-emeghachi omume na egwu egwu ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ozu nna ochie anyị mere na egwu ahụ.
Dika mmadu na-eji ihe ndi choro na ihe ndi na-aju anya na ebe ndi ozo di ha, ha choro ihe ndi ozo, ihe ozo di egwu ka ha di elu. Nchegbu na-enwekwu agụụ mmekọahụ nke na-agụnye ụba dopamine. Ngwá dị elu nke cortisol na usoro ahụ bụ ihe nrịba ndụ maka ọ bụghị nanị nrụgide, kamakwa ịda mbà n'obi.
Nchegbu nwere ike ime ka anyị mara. Na mberede, ndụ anyị nwere ike ịda mbà n'obi ma chee na enweghị ike ịnagide anyị. Anyị enweghị mgbagha nke esemokwu ma ọ bụ nsogbu. Ụbụrụ kwusiri ike na-adabere n'omume. Echiche echiche na-esi ike. Nnukwu nrụgide, ruo ogologo oge, na-aghọ nrụgide na-adịghị ala ala. Nke a bụ mgbe ahụ anyị na-enweghị ike iweghachi onwe ya dịka ọ na-enwe nnukwu nrụgide. Ọ bụ ihe na-eme ka anyị daa, na-emebi usoro anyị ji alụso ọrịa ọgụ, na-eme ka anyị nwee ike ịdaba n'ihe mberede na-eme ka anyị nwee nkụda mmụọ, nchegbu ma ghara ịchịkwa. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị na-enwe ike ịnweta ihe ndị ọzọ na-akpali akpali, ọgwụ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, yana ịmepụta ihe n'ịntanetị ka ukwuu iji mee ka obi dịkwuo anyị mma ma zere ihe mgbu ahụ.
Iji oge ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na-etinye nrụgide dị ukwuu na ume ahụ echekwara ma na-eduga n'ụdị nsogbu anụ ahụ na nke uche niile. HPA Axis Dysregulation na Men na Nsogbu Mmekọahụ (2015) - Nnyocha nke ụmụ nwoke 67 na-eri ahụ mmekọahụ na njikwa afọ 39. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) bụ ihe kachasị mkpa na nzaghachi nrụgide anyị. Ihe riri ahụ gbanwee ihe mgbagwoju anya nke ụbụrụ na-eduga na oghere HPA dysfunctional. Ọmụmụ ihe a banyere ndị na-eri agụụ mmekọahụ (ndị na-edina ụdị onwe ha) chọpụtara mgbanwe ntụgharị ngbanwe nke yiri ihe ndị ahụ na-eri ahụ.
Otu anyi si edozi nsogbu na otutu afo bu ihe di mkpa maka ndu anyi na mmekorita anyi. Dị ka anyị hụworo site na Nye ihe omumu, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ịda mbà n'obi na neurosis bụ ihe kasị egbochi mmekọrịta dị mma na nke obi ụtọ.
Nchegbu na-eme ka ahụ na-elekwasị anya na nlekọta ume site na isi dịka ụbụrụ, usoro nchịkọta nri na akụkụ mmepụta iji na-enye ume n'ebe ndị dị mkpa ume ozugbo iji wepụ anyị n'ihe ize ndụ ahụ. Nke a bụ ihe kpatara oge, ọ gwụla ma anyị na-achịkwa nrụgide anyị nke ọma, na nchekasị bụ ihe a na-apụghị izere ezere, anyị na-emepụta ọnọdụ egwu dị ka ọnyá afọ obi ọjọọ, ma ọ bụ ncheta na-adịghị mma na enweghị ike itinye uche ruo ogologo oge. Anyị na-eme ka usoro ọgwụgwọ anyị ghara ịda mbà, anyị na-ebute ọrịa ndị dị mfe karị ma na-adịte aka n'ịgwọ ọrịa. Nsogbu na-emetụta afọ anụ na ahụ.
N'okpuru nrụgide na-adịghị ala ala, adrenaline na-emepụta ọnya n'ime arịa ọbara anyị nke nwere ike ịkpata nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok, cortisol mebiri mkpụrụ ndụ nke hippocampus, na-akụda ike anyị ịmụta ma cheta.
Onye ọ bụla, ụdị nsogbu kachasị njọ bụ mmetụta na anyị enweghị ike ịchịkwa nsogbu ahụ, na anyị enweghị enyemaka.
Na nkenke, nrụgide na-eme ka anyị pụọ.
<< Mmetụta Ahụ Ihe Nlekọta Na-enweghị Ọgwụ >>